Mogadishu Journal » 2019 » December » 1
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in Al-Shabaab ay weeraro badan ku qaadeen Dhismaha Wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Waxaa uu sheegay in Ciidanka Ammaanka ay ka hor tageen weeraro badan oo ay ku qaadeen Al-Shabaab dadka ku howlanay...
Puntland oo dalacsiisay Taliye Xaaskiisa ku riday Cudurka HIV/AIDS
Mjournal :-Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, ahna Ku-simaha Madaxweynaha ayaa Xeer Madaxweyne Lr-19, December 01,2019 ku dalacsiiyey sarkaal ka tirsan ciidanka Booliska Puntland. Sarkaalkan Bashiir Cismaan Cawad oo ahaa Kabtan ayaa loo dalacsiiyay darajada Gaashaanle,kadib markii...
Mjournal :-Bilo kaddib markii uu Abaal marinta Nabadda ku guuleystay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaa uu wajahayaa eedeymo la xiriira inuu faragelin ku haayo arrimaha gudaha dalalka deriska la ah Itoobiya. Sida uu qoray Wargeyska Daily Nation oo ka soo baxa dalka...
Mjournal :-Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland, Ahna Ku-simaha Madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku kala saxiixanayeen Wasaaradda Duulista Hawada iyo Garoomada Puntland iyo Shirkadda Frontier Service Group oo laga leeyahay dalka Shiinaha...
Mjournal :-Wasiirka Difaaca ee Ethiopia oo aad ugu dhowaa Ra’isulwasaare Abiy Ahmed, ayaa dhaleeceeyey qorshaha loogu bedelayo Isbahaysigii EPRDF ee Itoobiya maamulayay xisbi qura, taasi oo muujineysa kala qeybsanaan ka hor doorashada qorsheysan in la qabto sanadka danbe ee...
Mjournal :-Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa shaagay in Lix xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab ay ku dileen agagaarka Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo. Mohamed Ali Abdullahi, oo ah Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka ee Baardheere ayaa saxafadda u sheegay in ay iyagu weerar ku...
Mjournal :-Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka dowlad Goboleedka Puntland ee xilka looga qaaday Mooshin ee Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhooba-daareed ayaa ka hadlay xarig shalay Magaalada Boosaaso loogu geystay Odayaal dhaliil u jeediyay Puntland. Dhooba-daareed ayaa waxaa uu si...